နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ - AFP)
ဖမ်းဆီး တရားစွဲခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ကောင်စီက အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ အမှု ၁ ခုထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အမှုဖွင့်ထားတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု စုစုပေါင်း ၅ မှုရှိသွားပါပြီ။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ၂ လကြာရပ်ထားတဲ့ အမှုကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ပြန်စပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် နေမကောင်းတဲ့အတွက် သူ့အမှုတွေကို မကြားနာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ အမှုတခုကိုတော့ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံ ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်း နန်းလောဝ် ပြောပြပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုတွေကို သီးသန့်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ နေပြည်တော်လုပ်ထားတဲ့ အထူးတရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် ရုံးချိန်းပြန်စပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ၂ လကြာ အမှုစစ်ဆေးကြားနာမှုတွေ ရပ်ထားခဲ့ပြီး ပြန်စတဲ့နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ အမှုထပ်ဖွင့်ထားတာသိခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ဇော်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“အခုကျနော်တို့ သိတာက ဗဟန်းမှာစွဲတဲ့ တခုရှိတယ်။ အဲဒါမှာ ဦးဝင်းမြင့်မပါဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်ထဲပါ။ ဒီကနေ့တော့ သူမက တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကနေ သူ့ဆီပို့တဲ့ အမှုခေါ်စာရင်းတွေပြပါတယ်။ အဲဒါတွေအတွက် ပါဝါတင်ဖို့လုပ်ပါပြောတယ်။ ကျနော်တို့ အဲဒါတွေကောင်းကောင်း မကြည့်နိုင်ဘူး သူလဲနေမကောင်းတော့။ သေချာစကားမပြောနိုင်တော့ မနက်ဖန်ကျမှသေချာဆွေးနွေးမယ်။ ပြမယ်ပြောပါတယ်။”
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းတရားရုံးမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက် ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅ နဲ့ အမှု ၄ မှု ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ ထပ်စွဲတဲ့ အမှုနဲ့ဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ စွဲတာ စုစုပေါင်း ၅ မှု ဖြစ်ရှိသွားပါပြီ။ နေပြည်တော်မှာ စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေကြားနာဖို့ ဒီနေ့ ရုံးချိန်းထုတ်ပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ မကြားနာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ရှေ့နေကြီးဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
“၉ခွဲမှာသူနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်။ အရင်အစီအစဉ်အတိုင်းပေါ့။ ဝင်လာချိန်မှာ သူ မျက်နှာတွေနီနေတယ်။ နှာမွှန်နေတယ်။ အဲတော့ထိုင်ပြီးပြီးချင်း သူနေသိပ်မကောင်းဘူး။ ခေါင်းတွေ တော်တော်မူးနေတယ်။ နေမကောင်းတာ ကျန်းမာရေးလားဆိုတော့ ဖျားတာနာတာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ တူတယ်တဲ့။ သူတလျှောက်လုံး ဆရာတို့နဲ့ မတွေ့တဲ့ ၂ လအတွင်းမှာလဲဘဲ ဘာမှသိပ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ အခုဟာက သူအလာလမ်းမှာ ကားကြမ်းလို့တဲ့။ တော်တော်ရမ်းတယ်။ အဲမှာမူးသွားတာလို့ပြောတယ်။ သိပ်စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ နောက်နေ့မှပြောတာပေါ့တဲ့ နောက်နေ့လည်းရုံးချိန်းတွေရှိတာကို. ပြော ပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်။”
အမှုကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေ ရပ်ထားချိန် ၂ လအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေနဲ့ တွေ့ခွင့် မရခဲ့ဘဲ ဒီနေ့မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နေမကောင်းလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုတွေကို မကြားနာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ရဲ့ အမှုတွေကိုတော့ စစ်ဆေးကြားနာခဲ့ပါတယ်။
“ဒီကနေ့က တမှုဘဲစစ်တာပေါ့။ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အမှု သဘာဝဘေး ၂၅ပေါ့။ ဦးဝင်းမြင့်အမှုကတော့ ရှာဖွေသက်သေစစ်တယ်။ ရှာဖွေသက်သေစစ်သလိုဘဲပေါ့။ ရှေ့ကလူတွေလို ပေါ့၊ ဒီပစ္စည်းတွေ သိမ်းရတယ်ဆိုတာ လက်မှတ်ထိုးရတယ်ပေါ့။ ရှာဖွေသက်သေစစ်တော့ အဲပစ္စည်းတွေ ကောင်းကောင်းမမြင်ခဲ့ရပါဘူးဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင်လဲ ဝန်ခံသွားပါတယ်။ စစ်တဲ့ အခါရုံးရှေ့မှာ တင်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဟုတ်မဟုတ်လဲ သူကောင်းကောင်းမသိပါဘူးလို့ သူ ကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်။ မနက်ဖန်မှာတော့ ၅၀၅-ခ အတွက် စွဲချက်လျှောက်လဲချက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။”
သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် တရားစွဲထားတဲ့ အမှုတွေထဲက အငယ်စားအမှုတွေကို နေပြည်တော် သီးသန့်တရားရုံးမှာ တပါတ်ကို ၂ ရက် ကြားနာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်ကျရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စွဲထားတဲ့ အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပျက်ပြားစေတဲ့ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ နဲ့ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ တို့အတွက် ကြားနာစစ်ဆေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၊ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ (၂)မှု၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေ နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော် ကိုလွှဲပြောင်းထား တဲ့ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃-၁ (ဂ) ၊ တခါ မန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာ ထပ်မံစွဲဆိုခံထားရတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅ နဲ့ အမှု ၄ မှု အပြင် ခုနောက်ဆုံး ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ အမှုဖွင့်ထားတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု စတဲ့ အမှုပေါင်း ၁၁ မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဖမျးဆီး တရားစှဲခံနရေတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို စဈကောငျစီက အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ အမှု ၁ ခုထပျတိုးလိုကျတဲ့အတှကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ အမှုဖှငျ့ထားတဲ့ အဂတိလိုကျစားမှု စုစုပေါငျး ၅ မှုရှိသှားပါပွီ။ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ ၂ လကွာရပျထားတဲ့ အမှုကွားနာစဈဆေးမှုတှေ ဒီနေ့ နပွေညျတျောမှာ ပွနျစပမေဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ့ နမေကောငျးတဲ့အတှကျ သူ့အမှုတှကေို မကွားနာနိုငျခဲ့ပါဘူး။ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့ရဲ့ အမှုတခုကိုတော့ စဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအကွောငျးအပွညျ့အစုံ ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျး နနျးလောဝျ ပွောပွပါမယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှုတှကေို သီးသနျ့စဈဆေးနိုငျဖို့ နပွေညျတျောလုပျထားတဲ့ အထူးတရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ကွားနာစဈဆေးမှုတှအေတှကျ ရုံးခြိနျးပွနျစပါတယျ။ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ ၂ လကွာ အမှုစဈဆေးကွားနာမှုတှေ ရပျထားခဲ့ပွီး ပွနျစတဲ့နမှေ့ာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကို အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒနေဲ့ ရနျကုနျမွို့မှာ အမှုထပျဖှငျ့ထားတာသိခဲ့တယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့ေ တရားလှတျတျောရှနေ့ကွေီး ဦးခငျမောငျဇျောက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“အခုကနြျောတို့ သိတာက ဗဟနျးမှာစှဲတဲ့ တခုရှိတယျ။ အဲဒါမှာ ဦးဝငျးမွငျ့မပါဘူး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတယောကျထဲပါ။ ဒီကနတေ့ော့ သူမက တိုငျးတရားလှတျတျောကနေ သူ့ဆီပို့တဲ့ အမှုချေါစာရငျးတှပွေပါတယျ။ အဲဒါတှအေတှကျ ပါဝါတငျဖို့လုပျပါပွောတယျ။ ကနြျောတို့ အဲဒါတှကေောငျးကောငျး မကွညျ့နိုငျဘူး သူလဲနမေကောငျးတော့။ သခြောစကားမပွောနိုငျတော့ မနကျဖနျကမြှသခြောဆှေးနှေးမယျ။ ပွမယျပွောပါတယျ။”
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး တိုငျးတရားရုံးမှာလညျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျ ဖကျြရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၅၅ နဲ့ အမှု ၄ မှု ဖှငျ့ထားတာရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရနျကုနျတိုငျး ဗဟနျးမွို့နယျမှာ ထပျစှဲတဲ့ အမှုနဲ့ဆို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ စှဲတာ စုစုပေါငျး ၅ မှု ဖွဈရှိသှားပါပွီ။ နပွေညျတျောမှာ စှဲဆိုထားတဲ့ အမှုတှကွေားနာဖို့ ဒီနေ့ ရုံးခြိနျးထုတျပမေဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နမေကောငျးဖွဈနလေို့ မကွားနာနိုငျခဲ့ဘူးလို့ ရှနေ့ကွေီးဦးခငျမောငျဇျောက ပွောပါတယျ။
“၉ခှဲမှာသူနဲ့တှတေ့ာပေါ့နျော။ အရငျအစီအစဉျအတိုငျးပေါ့။ ဝငျလာခြိနျမှာ သူ မကျြနှာတှနေီနတေယျ။ နှာမှနျနတေယျ။ အဲတော့ထိုငျပွီးပွီးခငျြး သူနသေိပျမကောငျးဘူး။ ခေါငျးတှေ တျောတျောမူးနတေယျ။ နမေကောငျးတာ ကနျြးမာရေးလားဆိုတော့ ဖြားတာနာတာတော့မဟုတျဘူးနဲ့ တူတယျတဲ့။ သူတလြှောကျလုံး ဆရာတို့နဲ့ မတှတေဲ့ ၂ လအတှငျးမှာလဲဘဲ ဘာမှသိပျမဖွဈပါဘူးတဲ့။ အခုဟာက သူအလာလမျးမှာ ကားကွမျးလို့တဲ့။ တျောတျောရမျးတယျ။ အဲမှာမူးသှားတာလို့ပွောတယျ။ သိပျစကားလညျးမပွောနိုငျဘူး။ နောကျနမှေ့ပွောတာပေါ့တဲ့ နောကျနလေ့ညျးရုံးခြိနျးတှရှေိတာကို. ပွော ပွီးတော့သူပွနျသှားတယျ။”
အမှုကွားနာစဈဆေးမှုတှေ ရပျထားခြိနျ ၂ လအတှငျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ အကြိုးဆောငျရှနေ့တှေနေဲ့ တှေ့ခှငျ့ မရခဲ့ဘဲ ဒီနမှေ့ ပထမဆုံးအကွိမျ ပွနျတှေ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နမေကောငျးလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ အမှုတှကေို မကွားနာနိုငျခဲ့ပမေဲ့ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ ရဲ့ အမှုတှကေိုတော့ စဈဆေးကွားနာခဲ့ပါတယျ။
“ဒီကနကေ့ တမှုဘဲစဈတာပေါ့။ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့အမှု သဘာဝဘေး ၂၅ပေါ့။ ဦးဝငျးမွငျ့အမှုကတော့ ရှာဖှသေကျသစေဈတယျ။ ရှာဖှသေကျသစေဈသလိုဘဲပေါ့။ ရှကေ့လူတှလေို ပေါ့၊ ဒီပစ်စညျးတှေ သိမျးရတယျဆိုတာ လကျမှတျထိုးရတယျပေါ့။ ရှာဖှသေကျသစေဈတော့ အဲပစ်စညျးတှေ ကောငျးကောငျးမမွငျခဲ့ရပါဘူးဆိုပွီး သူကိုယျတိုငျလဲ ဝနျခံသှားပါတယျ။ စဈတဲ့ အခါရုံးရှမှေ့ာ တငျထားတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှေ ဟုတျမဟုတျလဲ သူကောငျးကောငျးမသိပါဘူးလို့ သူ ကိုယျတိုငျပွောပါတယျ။ မနကျဖနျမှာတော့ ၅၀၅-ခ အတှကျ စှဲခကျြလြှောကျလဲခကျြ ဖွဈနိုငျတယျဗြ။”
သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့၊ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့အပျေါ တရားစှဲထားတဲ့ အမှုတှထေဲက အငယျစားအမှုတှကေို နပွေညျတျော သီးသနျ့တရားရုံးမှာ တပါတျကို ၂ ရကျ ကွားနာစဈဆေးနတောဖွဈပါတယျ။ မနကျဖွနျ စကျတငျဘာ ၁၄ ရကျကရြငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ စှဲထားတဲ့ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုပကျြပွားစတေဲ့ ရာဇသတျကွီးဥပဒေ ပုဒျမ ၅၀၅-ခ နဲ့ သဘာဝဘေး အန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲရေး ဥပဒပေုဒျမ ၂၅ တို့အတှကျ ကွားနာစဈဆေးဖို့ အစီအစဉျရှိပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ ပို့ကုနျသှငျးကုနျဥပဒေ ပုဒျမ ၈၊ ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇၊ ရာဇသတျကွီးဥပဒေ ပုဒျမ ၅၀၅-ခ၊ သဘာဝဘေး အန်တရာယျဆိုငျရာစီမံခနျ့ခှဲရေး ဥပဒပေုဒျမ ၂၅ နဲ့ (၂)မှု၊ ရနျကုနျအရှပေို့ငျးခရိုငျတရားရုံးကနေ နပွေညျတျောတရားလှတျတျော ကိုလှဲပွောငျးထား တဲ့ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒေ ပုဒျမ ၃-၁ (ဂ) ၊ တခါ မန်တလေးတိုငျးတရားလှတျတျောမှာ ထပျမံစှဲဆိုခံထားရတဲ့ အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၅၅ နဲ့ အမှု ၄ မှု အပွငျ ခုနောကျဆုံး ဗဟနျးမွို့နယျမှာ အမှုဖှငျ့ထားတဲ့ အဂတိလိုကျစားမှု စတဲ့ အမှုပေါငျး ၁၁ မှုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။